Maxeey tahay arrinta laga wado SSC ee dhoobo-daarood ka digay ? | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Maxeey tahay arrinta laga wado SSC ee dhoobo-daarood ka digay ?
Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland CabdiXakiim Maxamed Axmed (Dhooba-Daareed) oo ka hadlayay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa sheegay in uu jiro qorshe la doonayo in xildhibaanada Sool, Sanaag & Cayn kasoo jeeda lagu soo doorto magaalada Garoowe ee caasuamda Puntland oo horeyba loogu doortay doorashadii u dambeysay ee 2016-kii.
Dhooba-Daareed ayaa sheegay in ay kasoo horjeedan qorshahaas oo uu sheegay in ay hadda ka shaqeynyaan dad kasoo horjeeda Midnimada Soomaaliya, loona baahan yahay in maanka lagu hayo gobaladaas in ay doonayaan in ay aayahooda ka tashadaan.
Gudoomiyihii hore ayaa cadeeyey in ay gobaladaas xaq u leeyihiin in ay go`aansadaan halka doorashadooda lagu qabanayo, si lamid ah sida ay Somaliland xildhibaanadeeda ugu soo baxaan doorasho deegaanka magaalada Muqdisho ee ka dhaxaysa Ummadda Soomaaliyeed.
Dhooba-Daareed ayaa sheegay in ay uga digayaan dawladda Faderaalka, Guddiga Doorashooyinka & Beesha Caalamka qorshaha la xariira in doorasho deegaanka xildhibaanada Sool, Sanaag & Cayn laga dhigo magaalada Garoowe oo ay kasoo horjeedaan.
Madaxweynaha Puntland ayuu ku eedeeyey in uu ka leeyahay dano siyaasaded in xildhibaanada SSC laga soo doorto magaalada Garoowe, oo uu doonayo in shaqsiyad fulinaya damaciisa siyaasadeed uu kusoo saaro kuraastan, taas oo ay diidan buu yiri dadka gobaladaas.
Previous articleRoobab Dabeeylo wata oo Puntland si daran u saameeyay (Aqriso )
Next articleXOG: Laba Nin oo Soomaaliya oo kiis halis ah loogu xidhay Madaarka Jomo Kenyatta ?
Ali September 16, 2020 At 8:51 pm
Dhooboow siyaasada si sharaf-xumo leh
Baad uga dhacday dadka reer SSC danahooda
Iyo maamulkooda ayaga kaa og adigu xoogaagii
aad rabtey inaad fidno kaga dhex abuurto
Puntland waa lagugu la fahmey kadibna shilimaantii waxaad maqaaxiyo kaga furatay
Turkiga waa la ogyahay nin banaanka ka soo
Cataabaya cidi ma dhageysato ee digsiyadaada
Is xalo kkkkkkkk bariiskaaga iska Karskens kk